ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्था र अमेरिकी चुनाव ! - Subhay Postट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्था र अमेरिकी चुनाव ! - Subhay Post
ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्था र अमेरिकी चुनाव !
सुभाय् संवाददाताOctober 3, 2020 मा प्रकाशित (३ हफ्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट
दोनाल्ड ट्रम्पलाइ कोरोनाभाइरसले शिकार पारेको समाचार हिजो थाहा भो। अहिले उनमा थकान बेस्मारी बढेछ । उनको उपचारमा परिक्षणकालीन पोलिक्लोनल एन्टीबडी दिने बिधि अपनाइएछ। यो विधि जम्मा २५० जनामा परिक्षण गरीएको रहेछ । यो विधिले भाइरसको बृद्धिदर घटाउने रहेछ । एकैचोटी परिक्षणकालीन विधि नै प्रयोग गरेको हुनाले ट्रम्पको अवस्था संगीन रहेको संकेत दिएको छ।
ट्रम्पले हाइड्रोक्सिक्लोरोकिन, जिंक र एजिथ्रोमाइसिन ले उपचार गर्छ होला भन्ने सोच थियो, यो औषधि उनले गत मे महिनामा प्रयोग गरेको जानकारी दिएका थिए । तर उनको अवस्था छिटै कमजोर भएर गएको पो हो कि भन्ने शंका छ। लामो समय सम्म थोरै मात्र आराम गरी सक्रिय रहेको हुनाले उनको स्वास्थ्य बिग्रने आशंका पहिला नै चर्चित थियो।
बिहान ३ बजे देखि ट्वीटरमा संलग्न देखिने ट्रम्प कतिपय अवस्थामा दिनको ३ फरक फरक राज्यको चुनावी भेलाहरु समेत भ्याइदिन्थे। उनको उमेरको लागि उनको सक्रियता अस्वाभाविक नै थियो। आज उनले कुनै नयाँ ट्वीट गरेका छैनन, र उनको ट्वीट हेरेर बिहानै देखि रोमाञ्चित हुने बानी परीरहेका करोडौं करोडलाइ अहिले खल्लो लागीरहेको होला ।
अहिले उनको अवस्था निकै छिटो छिटो खराब हुँदै गएको आशंका छ। उनलाइ ब्लड क्लटिङ समस्या देखिएको आशंका छ । शायद त्यसैले हाइड्रोक्लोरोकिन प्रयोग नगरेको होला । अहिले केहि बेरमा नै उनलाइ ह्वाइट हाउसबाट वाल्टर रीड सैन्य अस्पतालमा लगिदै छ । हेलीकप्टर अहिले ह्वाइटहाउस बाहिर ट्रम्पलाइ कुरीरहेको छ, टिभीहरुले लाइभ प्रसारण गरीरहेको छ । म पनि त्यहि लाइभ हेर्दै छु ।
ट्रम्पलाइ अहिले जिंक, भिटामिन डि, फेमोटिडाइन, मेलाटोनिन, र एस्पिरिन औषधि दिइरहेको बताइएको छ। पोलीक्लोनल एण्टिबडी दिएपछि उनको शरिरमा त्यसको असर देखिन थालेको बताइन्छ। तर केहि गरी उनको अवस्था बोरिस जोन्सनको झै छिटै खराब हुँदै गए अस्पतालमा नै सजिलो हुन्छ भनेर अस्पताल लान लागेको होला ।
चुनाव हुन जम्मा ३२ दिन बाँकि छ । ट्रम्प छिटो निको नहुने अवस्था आए निकै अनिश्चितता देख्नु पर्ने हुने छ। तर बाइडेन चुनाव प्रचार अभियानले ट्रम्पबिरोधि नकारात्मक चुनाव प्रचार ब्यापक गरीरहेको छ । यस्तो बिरामी अवस्थामा पनि त्यस्तो प्रचार गर्ने? भनेर आलोचित भएपछि बाइडेन चुनावप्रचार अभियानले ती प्रचार सामग्री ट्रम्प बिरामी हुनु अगाडि कै सामाग्री भएको हुनाले प्रसारण हुन गएको भनेर बचाउ गरेको छ र, नकारात्मक चुनाव प्रचार सामग्री सबै स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ।
ट्रम्पको अवस्था मेडियाले छिनछिनमा अपडेट गर्दै गरेको बेला, उनको श्रीमती मेलानियाको अवस्था बारे भने खासै कसैले चर्चा गरेको छैन ।
ट्रम्पको अवस्था मेडियाले छिनछिनमा अपडेट गर्दै गरेको बेला, उनको श्रीमती मेलानियाको अवस्था बारे भने खासै कसैले चर्चा गरेको छैन । यो लेेेख लेेेख्दै गर्द्दा ऊनी हेलिकप्टरमा छिरेका छन् । अब केहि मिनेटमा उनको हेलिकप्टर उड्दै छ। अर्को ७२ घण्टा कम्तिमा पनि ट्रम्प अस्पतालमा बस्नुपर्ने होला ।